Ememe Greek Islands | Akụkọ Njem
Mgbe anyị chere echiche ịga njem Greece o doro anya na anyị enweghị ike ịhapụ ịtụnanya ha isuo. Ma enwere ọtụtụ, otu mara mma karịa nke ọzọ, nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma nwee obi ụtọ ... Ma olee otu ị ga - esi kpebie ihe Agwaetiti Greek itinye na ndepụta ahụ na nke ị ga-ewere ya?
na Agwaetiti Greek Ha bụ ebe anyị na-aga taa, yabụ ọ bụrụ na ị chebeghị echiche banyere ebe ị ga-aga n'oge ọkọchị, kedu ka ị ga - esi jikọta acha anụnụ anụnụ nke elu igwe na acha anụnụ anụnụ nke Mediterenian na ọcha dị ọcha nke ụlọ agwaetiti agwaetiti Mediterranean?
1 Agwaetiti Grik
2 Agwaetiti Cyclades
3 Agwaetiti Dodecanese
4 Agwaetiti Ionian
5 Agwaetiti Saron na North Aegean
6 Agwaetiti Sporades
Na ụkpụrụ ọ bara uru ịkọwapụta na ọ bụghị otu agwaetiti ma ọ bụ abụọ. E nwere ọtụtụ puku, ụfọdụ puku isii ka ọ bụrụ eziokwu. N'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ileta ha niile. Ma ọ dịghị mkpa. Ọ bụ n'ụzọ doro anya banyere Aegean, Ionian, Saronic, Dodecanese, Cycladic na agwaetiti Sporades. N'ime ndị kachasị mkpa bụ Chios, Crete, Euboea, Rhodes na Lesbos.
Saronics dị nso na Atens, Cyclades bụ nnukwu ìgwè nọ n'etiti Aegean, ndị Dodecanese dị n'etiti Turkey na Krit, ndị Sporades dị n'etiti etiti Tesalonaịka na Atens, ndị Ionia dịkwa nso na Italytali.
Kreti Ọ bụ agwaetiti nke osimiri ma bụrụ nke kasị ukwuu nke agwaetiti Greek na nke ise kachasị ukwuu na Oké Osimiri Mediterenian dum. Nwere ike isi ebe ahụ banye n'ụgbọ mmiri site na Piraeus, ọdụ ụgbọ mmiri dị na Atens, na Chania. Ọ bụ awa itoolu nke njem. I nwekwara ike ịga Heraklion, ọ dị ntakịrị ọnụ ala mana ọ na-ewe otu oge ahụ. A na-atụ aro ka ị zụta tiketi ozugbo site na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, mgbe ịmalitere njem na agwaetiti niile. O doro anya, ịnwekwara ike iji ụgbọ elu gaa.
Ọ bụrụ na-amasị gị ndụ osimiri Crete bụ ihe kachasị mma. Obodo Chania mara mma, nwee ọmarịcha ụdị osimiri ndị Venetị na ọmarịcha ọkụ. Osimiri ya dị ebube, enwere nke nwere ájá pink, Elafonissi, n'agbanyeghị na ị ga-adị njikere ịrịgo na ịrị elu ugwu. E wezụga obodo ya abụọ, Chania na HeraklionỌ bụrụ na ịnọ ihe karịrị otu izu, ị nwere ike gaa karịa ma mata obodo na obodo ndị ọzọ.
Agwaetiti Cyclades bụkwa ebe ama ama n'ihi Ha nọ nso Atens na-akpachikwa anya kwa. Ana m ekwu maka Delos, Ios, Kea, Mykonos, Amorgos, Anafi, Paros, Naxos, Santorini, Syros na ụfọdụ ndị ọzọ. Otu ihe a, ị nwere ike iburu ụgbọ mmiri na Piraeus na n'ihe dị ka awa anọ ị rutere Paros, site na ebe ahụ n'otu awa ị nọ naanị na Naxos na n'ime elekere abụọ ọzọ ị rutere Santorini mara mma.
Ios bụ pealu, bụkwa oke osimiri. Ọ bụrụ na ị nọrọ Santorini Na-abata ọsọ ọsọ na ebe a maka ndị na-eme njem azụ na-achọ naanị anyanwụ na oriri na abalị. Kwaa ákwá Ọ bụ obodo ya, mara mma ma sie ike n'elu ugwu, ọdịnala nke ọma na ya. O jupụtara na chọọchị dị iche iche na echiche ndị sitere n'elu bụ ihe a ga-ahụ. Ma ọ dịkarịa ala osimiri 20, Ios ga-adị na ndepụta gị.
Ebe ndị ọzọ enwere ike ime na Cyclades bụ Kea, naanị otu awa si Atens, ọhịa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Milos, na gburugburu 70 osimiri, doro anya Mykonos, maka ndị gays kamakwa maka ndị ezinụlọ na ndị enyi chọrọ ikpori ndụ, Nke na ebe ihe ochie ya, Naxos, awa atọ na ọkara site na Atens, Paros, obere ma nwee osimiri ndị nrọ, na o doro anya na Santorini nwere ụlọ nkwari akụ ndị mara mma na echiche ya banyere nnukwu ala.
Anyanwụ na-acha n’ebe a, ma n’oge oyi ma n’oge ọkọchị. Enwere ụfọdụ Akara 15 na otu, okenye, na ihe karịrị otu narị agwaetiti. Ha so n’otu a Kos, Karphatos, Leros, Rodas, Tilos na Chalki, n'etiti ndị ọzọ. Nwere Roman na Ottoman gara aga na omenaala ya gosipụtara ya ebe obibi ndị mọnk, ebe obibi ndị mara mma, obí na ebe ewusiri ike n’ebe niile.
Kos ọ bụ ezigbo ebe ọ bụrụ na-amasị gị mmiri ọkụ na izu ike ndụ. O nwere iyi mmiri na-ekpo ọkụ ọbụna n’ụsọ osimiri n’onwe ya, ọ fọrọ naanị ọkara ọkara ụgbọala ga-ebute n’ọdụ ụgbọ mmiri nke Kos. E nwere ọtụtụ ponds n'etiti ájá na ọ bụ nnukwu. Na mgbakwunye, enwere mkpọmkpọ ebe mgbe ochie na nke ochie, ebe ewusiri ike nke Order nke Knights nke Saint John, ị nwere ike ịgba okirikiri, jee ije ma zuo ike. Maka usoro ị maara nke ọma enwere Leros.
Leros dị nso na Turkey Amabeghị ya nke ọma mana ọ bụrụ na ị na-achọ obere njem, nke a bụ ebe ị na-aga. O nwere ihe niile site n’agwaetiti ndị ọzọ; osimiri, obodo, nri n'oké osimiri na ịma mma, mana na-enweghị njem. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-enweghị ọtụtụ njem. Site n'ụgbọ elu ị nwere ike iru ebe ahụ na minit 45 site na Atens na ụgbọ mmiri dị ogologo, awa iri na anọ. N'ụzọ doro anya, Rhodes enweghị ike ịnọ ebe a.
Rhodes kwekọrọ na akụkọ ihe mere eme. Obodo ochie bụ Ihe Nketa Worldwa dị ka UNESCO si dị ebe a, ị nwere ụlọ alakụba nke Suleiman, Castle of the Knights of Rhodes na saịtị ebe otu n’ime ihe ịtụnanya asaa nke ụwa ochie mere mgbe mbụ, ama ama Colossus nke Rhodes.
Mana Rhodes nwekwara oke osimiri ma mara ezigbo mma: Lindos, dịka ọmụmaatụ, bụ bọs site na obodo ochie ma bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa. Ọtụtụ ndị nwe ezumike na ezinụlọ na-ahọrọ agwaetiti ahụ mana n'abalị enwere ọtụtụ ndụ abalị.
Na ngụkọta enwere agwaetiti asaa dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ: Kythira, Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Paxos, Ithaca na Lefkada. Ọtụtụ n'ime ala ya aghọwo akwụkwọ ozi nke Gris. Nke a bụ ihe gbasara Osimiri Shipwreck a ma ama na Zakynthos nke ị hụrụ n'okpuru. Lee ka o si dị mma!
Kefalonia dịkwa mma ma buru ibu. Gị n'ọdụ ụgbọ mmiri, FiskardoỌ mara mma, agwaetiti ahụ n'ozuzu nwere osimiri mara mma, ụfọdụ na-emepe emepe na nke dịpụrụ adịpụ, dị mma maka ịla n'iyi naanị. Ma ọ bụrụ na ịchọọ inyocha ị nwere ike ịma nke Ọdọ Melissania Cave nke dị n'okpuru mmiri ma ọ bụ lelọ nke Assos.
A maara Lefkada ịbụ agwaetiti kachasị na Caribbean nke agwaetiti Greek. E nwere ọnụ ọnụ ugwu dị ọcha ndị ahịhịa ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, turquoise oké osimiri, na anyanwụ dara. Tinye Ogwe, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na họtel na ị nwere ngwugwu dị egwu.
Agwaetiti Saron na North Aegean
N'ime agwaetiti ndị dị na North Aegean bụ Chios, Ikaria, Lesbos, Lemnos, Thasos, Psara ma ọ bụ Samos, ọmụmaatụ. A mụrụ Homer na Chios na ebe obibi ndị mọnk nke XNUMXth bụ World Heritage Site. Samos bu uzo si Turkey wee nwe nkuku a na-echeghi echefu. Na nke ya, Thasos bụ agwaetiti dị ọnụ ala na nke a na-amachaghị ama.
N'ikpeazụ enwere Saronic Islands, nke dịka ha dị nso na Atens bụ ngwụcha izu ma ọ bụ ezumike ezumike. Poros, Salamina, Spetses, Hydra, Agistri na Aegina bụ aha ha. Aegina dị naanị nkeji iri anọ na ise site n'ụgbọ mmiri si Piraeus.
Ọ bụ obere agwaetiti nke naanị agwaetiti 24 n'etiti, dịka nke kachasị ewu ewu, Skopelos, Skyros, Skitahos na Alonnisos. Skopelos na Alonnisos bụ ebe sna fim Mamma Mia!, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike nweta echiche banyere ịma mma ya.
O zuru ezu ịhụ foto dị n'isiokwu ahụ ịchọrọ ịgagharị, mana dịka ị gụrụ, agwaetiti ndị ahụ nwere ịma mma nke ụwa na ọtụtụ akụkọ ntolite. Ọ ga-abụ ikpebi ihe kachasị amasị gị ma ọ bụ otu ị ga - esi jikọta nke ọ bụla. Ferry ma ọ bụ ụgbọ elu ma ọ bụ lelee agwaetiti ndị a na-eleta na njem, nke bụkwa nhọrọ mgbe ị na-achọghị ịme ya n'onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Agwaetiti Grik